ANKATSO II Lehilahy mpangalatra saika matin’ny fitsaram-bahoaka
Antsohihy Omby halatra 80 no tra-tehaka
Mirongatra indray ny halatr`omby. Sarona tao amin` ny kijany Antsalohavery, izay eo anelanelan' ny kaominina Ampandriakilandy sy Kaominina Anjalazala, ao anatin` ny distrikan' Antsohihy, omby maherin` ny 80 isa izay tsy nanana taratasy mazava.
Naharay antso ny vondrom-paritry ny zandary tao Betroka omaly vao mangiran-dratsy fa misy dahalo manafika tanàna ao amin’ny kaominina ambanivohitr’i Bekijoro ao amin’ny distrikan’i Betroka. Nitranga ny fanafihana ary omby 100 no lasan’ireo dahalo. Raikitra ihany koa ny fanarahan-dia ka tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany maraina no nitranga ny fifampitifirana mahery vaika teo amin’ireo dahalo sy ny zandary. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia mpamily ny fiaran’ny zandary ity adjudant chef namoy ny ainy ity. Tao anatin’ny fifanjevoana dia niraikitra tao anaty tatatra ny tongony ka tsy afaka nitsoaka izy. Voatifitra indray mandeha izy ka lavo tamin’ny tany, nanatona ireo dahalo ka nanaram-po nitifitra sy namono nahafaty azy avy eo, araka ny angom-baovao natao halina. Efa nisy ihany ny fampandrian-tany nataon’ny zandary tany amina faritra maro tany Betroka ary efa somary nilamina, saingy ankehitriny dia mirongatra indray ny asan-dahalo ary miaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika hatrany ireo malaso amin’izany.